बंगलादेशले भन्यो: भारतीयहरु खाना नपाएर भोजकै लागि हाम्रो देशमा आउँछन् ! – " सुलभ खबर "
बंगलादेशले भन्यो: भारतीयहरु खाना नपाएर भोजकै लागि हाम्रो देशमा आउँछन् !
काठमाडौं । भारतले पटक–पटक बंगलादेशका नागरिक अवैध रुपमा आफ्नो देशमा घुसेको आरोप लगाएपछि ढाकाले पनि जवाफ फर्काएको छ । बंगलादेशका विदेशमन्त्री डा. एके अब्दुल मोमेनले भारतीय नागरिकहरु राम्रो अर्थव्यवस्था र निःशुल्क भोजनका लागि बंगलादेश आइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले भारतीयहरु बंगलादेशमा आइरहेको खुलासा गर्नुभएको हो । भारतीयहरुले बंगलादेशमा राम्रो जागिर र निःशुल्क भोजन पाइरहेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । भारतीयहरु बंगलादेशमा आउने गरेको प्रश्नमा उहाँले बंगलादेशमा अवैध रुपमा रहेका भारतीयलाई फिर्ता पठाइने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । भारतलाई जवाफ फर्काउदै बंगलादेशले आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता लिन आफुहरु तयार भएको पनि बताएको छ ।
भारतले सुची तयार गरेर दिएको खण्डमा आफुहरु आफ्ना नागरिक फिर्ता लिन तयार भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भारतको तुलनामा बंगलादेशको अर्थव्यवस्था उत्कृष्ट रहेको भन्दै बेरोजगार भारतीय बंगलादेश आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । Source